စာပေါ်အောင်ပြုလုပ်ခြင်း (ဘလော့အထောက်အကူပြု) - မော်စီ နှင့် သူ၏အိပ်မက်များ
ဘလော့လောကထဲကို နေ့စဉ်နဲ့အမျှဘလော့ဂါတွေ တိုးလာတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ ကျနော့်အမြင် ဘလော့ဆိုတာ ကိုယ်ပိုင် website ငယ်လေးတစ်ခုပါပဲ။ ဘလော့ဂါတိုင်းက webmaster မဟုတ်ကြတော့ ကုဒ်တွေကိုနားမလည်ကြဘူးပေါ့။ ကျနော်အပါအ၀င် HTML code တွေကိုနားမလည်သူများအတွက် နည်းပညာဆိုင်ရာနားလည်ကျွမ်းကျင်တဲ့ ဘလော့ဂါများက မည်သို့မည်ပုံပြုလုပ်ရမည်ကို ရေးသားတင်ပို့ပေးထားပါတယ်။ သူတို့တွေဆီမှ ကျနော်သိတာလေးတွေကို ပြန်လည်ဝေမျှလိုက်ခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်။
ကျနော်ဘလော့လည်တဲ့အခါမှာ ဘလော့တစ်ချို့တွေမှာ စာမပေါ်ပဲ ??????? တို့ပဲပေါ်နေတာတွေကြောင့် မဖတ်ရပဲ ပြန်လှည့်သွားရပါတယ်။ ကျနော် နည်းပညာဆိုင်ရာ ဘလော့ဂါတွေနှင့် တစ်ခြားသောဆရာတွေဆီမှ သိသလောက်မှတ်သလောက် ဖော်ပြချင်ပါတယ်။ ( html code တွေနဲ့ ဝေးကွာသောသူများအတွက် အဓိကရည်ရွယ်ပါသည်။)
ကဲစပြီး . . .
ကျနော်တို့ http://www.blogger.com/ ကနေ login လုပ်ပေါ့။ ပြီးရင် Layout ကိုသွားလိုက်ပါ။ layout အောက်မှာမှ
Edit HTML ကိုသွားလိုက်ပါ။ Edit Template ခေါင်းစဉ်အောက်မှာ့html code တွေရှိတဲ့ box လေးတစ်ခုကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီ box ထဲမှာ ကျနော်အောက်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ code တွေကို ရှာကြည့်လိုက်ပါ။
<Variable name="bodyFont" description="Text Font" type="font"
default="normal normal 100% 'Trebuchet MS',Verdana,Arial,Sans-serif">
<Variable name="pageTitleFont" description="Blog Title Font" type="font"
default="normal bold 200% 'Trebuchet MS',Verdana,Arial,Sans-serif">
<Variable name="descriptionFont" description="Description Font" type="font"
<Variable name="headerFont" description="Sidebar Title Font" type="font"
default="normal bold 100% 'Trebuchet MS',Verdana,Arial,Sans-serif">
<Variable name="postTitleFont" description="Post Title Font" type="font"
default="normal bold 135% 'Trebuchet MS',Verdana,Arial,Sans-serif">
font မထည့်ရသေးဘူးဆိုရင် ဒီလိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Template ခွဲပြားမှုတွေကြောင့် code တွေလည်း ကွဲပြားနိုင်ပါတယ်။
အဲဒီမှာတွေ့နေရတဲ့ % တွေရဲ့နောက်မှကပ်ရပ်မှာ space လေးတစ်ချက်ပုတ်ပြီး ကိုယ်သုံးနေတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ font နာမည်ကိုထည့်လိုက်ပါ။ တစ်ချို့တမ်းပလိတ်တွေမှာ % ကိုအနည်းငယ်သာတွေ့ရပြီး တစ်ချို့မှာ အများကြီးတွေ့နိုင်ပါတယ်။ font ထည့်ပြီးရင် ဒီလိုပုံစံလေးဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။ ( ကျနော် ဇော်ဂျီဝမ်းနဲ့ ဥပမာလုပ်ပြထားတာပါ ဇော်ဂျီဝမ်းနေရာမှာ ကိုယ်သုံးနေတဲ့ font ကိုထည့်သုံးနိုင်ပါတယ်။)
default="normal normal 100% Zawgyi-one,'Trebuchet MS',Verdana,Arial,Sans-serif">
default="normal bold 200% Zawgyi-one,'Trebuchet MS',Verdana,Arial,Sans-serif">
default="normal bold 100% Zawgyi-one,'Trebuchet MS',Verdana,Arial,Sans-serif">
default="normal bold 135% Zawgyi-one,'Trebuchet MS',Verdana,Arial,Sans-serif">
အဲဒါတွေပြီးရင်တော့ Save Template ကို ကလင့်လုပ်လိုက်ပေါ့။
ကျနော်လက်လှမ်းမှီသလောက် နည်းပညာဆိုင်ရာဘလော့ဂါများရဲ့ မြန်မာစာပေါ်အောင်ပြုလုပ်နည်းများကိုပါ ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
ကိုမောင်လှရဲ့ Blogspot မှာ မြန်မာလို ရေးရတာ အဆင်ပြေအောင်...
ကိုညီလင်းဆက်ရဲ့ ဇော်ဂျီဖောင့် ကောင်းမွန်စွာ ပေါ်အောင်လုပ်နည်း
ကိုရန်အောင်ရဲ့ ဘလော့ဂ်တွင် ဇော်ဂျီဖောင့် Assign လုပ်ခြင်း….
နည်းပညာဆိုင်ရာနားလည်ကျွမ်းကျင်သောဘလော့ဂါများရဲ့ ဘလော့အထောက်ကူပြုပိုစ့်များ၏လင့်တွေကို ကျနော့်ရဲ့ sidebar တစ်နေရာမှာ ဖော်ပြပေးထားပါမယ်။
နောက်မှ အချိန်ရသလို ဘလော့အထောက်ကူပြုနိုင်မည့် အကြောင်းအရာတွေနဲ့ ကျနော်သိသလောက် နည်းပညာဆိုင်ရာ ဘလော့ဂါတို့ရဲ့ ဘလော့အထောက်ကူပြု ပိုစ့်များကို ဖော်ပြပေးပါအုံးမည်။ အားလုံးအစဉ်ပြေပါစေဗျာ။
ရေးသားသူ မော်စီ at 10:35 PM
ကျနော်ကြားဖူးသော ဟာသများ (၅)
ကျနော်ကြားဖူးသော ဟာသများ (၄)